दाँतमा प्वाल परेको छ ? घरेलु विधिबाट यसरी पुर्नुहोस् प्वाल परेको दाँत – Khabaarpati
November 22, 2020 Khabar PatiLeaveaComment on दाँतमा प्वाल परेको छ ? घरेलु विधिबाट यसरी पुर्नुहोस् प्वाल परेको दाँत
काठमाडौं, १७ फागुन : कसरी प्वाल पर्छ ? दाँत दुरुस्त भयो भने त्यसले सुस्वास्थ्यको संकेत गर्छ । दाँतको राम्रो ध्यान दिइएन भने ती कुहिन थाल्छन्। यस्तो अवस्थामा मुखमा अड्केका खानेकुराहरू मुखका ब्याक्टेरियाको सहायतामा एसिडमा परिणत हुन्छन्। यसले दाँतमा प्वाल बनाउँछ। यही प्वाललाई अंग्रेजीमा क्याभिटी भनिन्छ ।
क्याभिटी बन्ने र त्यसलाई उपचार गर्ने साँचो हाम्रै हातमा छ । हामीले अस्वस्थ खाना पूरै छोडेमा मात्र दाँतमा प्वाल बन्न पाउँदैन । खाना खाएपछि ब्रश गर्ने, कुल्ला गर्ने गरिरहनुपर्छ । अनि लगातार दाँत दुख्यो वा झमझम भयो भने तत्कालै दन्तचिकित्सकको सल्लाह लिनुपर्छ ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस्,,,
चिनीको मात्रा घटाउनुस् । चिनीमा धेरै एसिड हुन्छ र यसले प्लाक बनाउँछ जसका कारण दाँतमा प्वाल पर्छ ।नरिवलको तेलले दाँत कुल्ला गर्दा पनि धेरैथरी समस्या समाधान हुन्छन् । प्वाल पनि यही कुल्लाले ठीक गर्छ । दिनको कम्तीमा पाँच मिनेट कुल्ला गर्नुस् । अझ, खाली पेटमा कुल्ला गर्नुभयो भने झन् प्रभावकारी हुन्छ ।
एनडिटिभीबाट ,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस्,,,